Kodzero-dzevanhu, 01 Gunyana 2017
ZEC Inoti Mimwe Michina yeKunyoresa VaVhoti yeBVR Yapinda muNyika
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission Amai Rita Makarau vanoti mimwe michina yekunyoresa vanhu kuti vakwanise kuvhota ye biometric voter registration kana kuti BVR yasvika munyika kubva kukambani Laxton Group of Companies.
Dare rePamusorosoro muKenya Rinorasa Zvakabuda muSarudzo dzeMutungamiri weNyika
VaOdinga vakanyunyutawo vachiti michina yesarudzo yakanga yatambwa nayo izvo vakati zvakanga zvkanganiswa mashandiro ayo, uye zvakabuda musarudzo.
Amai Mujuru Vanoti Ivo naVaTsvangirai Vakazvipira Kuumba Mubatanidzwa
Mutungamiri webato rinopikisa reNational People’s Party Amai Joice Mujuru avo vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vanoti vane chivimbo chekuti nhaurirano nemutungamiri webato reMDC-T VaMorgan Tsvangirai dzichabudirira sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa.
Zuva ra 30 Nyamavhuvhu rinonzi neUnited Nations izuva rekurangarira avo vese vakatsakatikiswa pasi pose, zvikuru nenyaya dzezvematongerwo enyika uye mhuri dzavo idzo dzinenge dzichishungurudzika.
Doctor Tapiwa Mucherera ndimufundisi wechechi ye United Methodist muAmerica, uyezve vari murayiridzi pachikoro chekufundira hufundisi che Asbury Theological Seminar.
Nhengo dzeZanu-PF Dzofora muHarare Dzichitsigira Amai Grace Mugabe
Nhengo dzeZanu PF dzakafora muHarare nemusi weChiotatu dzichiratidza rutsigiro rwadzo kumudzimai wemutungamiri wenyika Amai Grace Mugabe avo vanonzi vari kutsoropodzwa nevakawanda mubato ravo.
VeMDC neZESN Voshora VaMudede neNyaya Yekutoresa Zvitupa Zvitsva Zvisina Kushambadzirwa Zvakakwana
Sangano rinorwira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena reZimbabwe Election Support Network, ZESN, rinoti riri kushushikana zvikuru nekusapiwa kwedzidziso yakakwana pamusoro pehurongwa hwekutoreswa kwevanhu zvitupa zvitsva huri kuparurwa nemusi weMuvhuro unouya nehofisi yamabharani mukuru wenyika, kana kuti Registrar-General.
Mapato ane Nhengo muParamende Anosangana neZEC
Mapato matatu ane nhengo mudare reparamende anoti Zanu PF, MDC-T, neMDC akasangana neZimbabwe Electoral Commission mukupera kwesvondo kuti vatsvage nzira dzekugadzirisa mutauro wasimudzwa nemitemo yakaziviswa neZEC kuti ndiyo ichashandiswa mukunyoreswa kwevanhu kuti vagozokwanisa kuvhota.
Mumwe Mutori weNhau Orohwa KuHarare Show Grounds Pange Pachishambidzwa MDC-T
Bato guru rinopikisa munyika reMDC-T nhasi range richiratidzirawo pamusika weHarare Agriculture Show asi zvinhu zvazoita mayama amire nerongo apo mumwe mutori wenhau Andrew Manyere arohwa nevanofungidzirwa kuti inhengo dzeZanu-PF.
Dare reHigh Court rapa mutongo wekuti vaimbove mutevedzeri wameya weguta reBulawayo, VaGift Banda, vadzokere pachinzvimbo chavo.